Ila Qosol waa-wareey Afar-ayaa af la'aan u Dhimatay. - Cakaara News
Ila Qosol waa-wareey Afar-ayaa af la'aan u Dhimatay.
Ila Qosol waa-wareey Afar-ayaa af la'aan u Dhimatay. waxaa Dhacday Xiliyadii Talyaanigu ay Xooga ku haysteen dadka afka soomaaliga ku hadla ayaa waxaa dhacday in Askartii talyaaniga Nin laga Dilay balse aan la garanayn Cidii dishay.
halkaa markay Giraantu marayso ayaa ay Askartii Talyaanigu Baadi-Goob u galeen in ay gacanta ku soo Dhigaan Ninkii Askariga ka dilay iyagoona 4 Nin oo Reer Baadiya ah ka soo Qabtay Agagaarkii falku ka Dhacay.
Askartii-talyaaniga oo 4tii Nin Dabada ka wada ayaa ay u keeneen Nin Soomaali ahaa oo iyaga gacansaar la-lahaa markaasay waydiiyeen in uu Talyaani ugu kala Turjumi karo 4ta Nin ee Dilka lagu tuhmayay Markaasuu ugu jawaabay Sii oo luqada Talyaaniga ku ah Haa.
Inkastoo uu kaga jawaabay Suaashii Talyaaniga sidii ugu haboonayd oo Cii ama haa ahayd waxaan meeshaba la soo dhigan xiligaa in ninkan soomaaliga ah talyaaniba ka yaqaano erega ah Cii ee luqada soomaaliga ah ku ah Haa. taliyihii Askarta Talyaaniga ayaa Ninkii waydiiyay suaashii 1aad oo ahayd"Maad garanaysaa ragan markaasu ku jawaabay Sii(haa)".
Su'aashii 2aad ayaa la waydiiyay ma garan kartaa in ragan Shifto yihiin saa kuye Sii(Haa). Su'aashii 3aad ayaa la waydiiyay ragan ma yihiin Kuwii Askariganaga Dilay markaasuu Yidhi Sii (haa).
Mar hadii Turjumaankii luqada talyaanigaba ka yaqaanay halka erey ee Luqada soomaaliga ku ah "Haa" uu cadeeyay in Askarigii Ragan ka dileen Maxay Sugi Saa rasaas ayay ooda uga aadeen( ku Tiriyeen) halkaasna ku Qudhbaxeen Balse Ninkii Trjumaanka Halka erey Yaaanay ee galaaftay ayaa Aflabadii Qayliyay isagooleh (Waa-Wareey Afar-ayaa af la'aan u Dhimatay).